Data Accelerator, mupiro mutsva waMicrosoft kuvhura sosi | Linux Vakapindwa muropa
Data Accelerator, mupiro mutsva waMicrosoft kuvhura sosi
Mugore rose rapfuura Microsoft yanga ichiri kuvhura nekugadzira yakavhurwa sosi mapurojekiti iyo yakatanga kuisa parutivi kupokana kukuru kune iyo nyika yeakavhurika sosi (kana zvakadaro zvinoita).
Uye hakusi kurerutsa mashandiro ayo asi kusiyana nemakore gumi apfuura paive nehondo yakaziviswa pane yakavhurwa sosi, zvinhu zvachinja kanenge mumakore apfuura. Sezvo mumazuva achangopfuura Microsoft yakavhurwa kunharaunda iyo yaita sarudzo yekuvhura yakaburitsa chirongwa chakakura chekugadzirisa dhata, Data Accelerator, iyo yaimboshandiswa mukati.
Kubva kuvandudzwa kwayo muna2017, chirongwa ichi chakashandiswa pamwero wakakura kune akasiyana Microsoft chigadzirwa zvigadzirwa zvinoshanda.
1 Nezve Data Accelerator
Nezve Data Accelerator
Data Accelerator yakatanga muna 2017 seyakakura-dhata dhizaini yekugadzirisa muMicrosoft's Vagadziri Chikamut iyo yakazoigadzira kuna Apache Spark nekuda kwezvikonzero zvehuremu uye nekukurumidza.
Data Accelerator inopfuura kungova rukorobho pakati peChiitikoHub uye dhatabhesi.
Inoita kuti vashandisi vagadzirise zviitiko zvinouya sezvavanoramba vachiparadzira, uyezve voendesa zvikamu zvakasiyana zvechiitiko chimwe chete kuzvitoro zvakasiyana zvepa data vachipa hutano hwekutarisa pamwe neyambiro yenyika yese yepombi.
Data Accelerator zvakare inopa yekumisikidza mushandisi interface uye kutonga / query dhizaini dhizaini iyo inobvumidza vashandisi kumuka nekumhanya vasina kunyora chero kodhi.
Uyewo, chero munhu anoita kufambisa dhata kazhinji iwe unofanirwa kushandisa inotsvedza hwindo kugadzirisa iyo data, kana kugadzirisa kunonoka kusvika kune iyo data, kana kuunganidza data nekufamba kwenguva.
Dhata Yekuwedzera inotsigira uye inogonesa kushandiswa kweaya maficha epamberi.
Zvinoenderana neyakavanzika Microsoft yakavhurwa sosi blog, dzimwe nzira dzeData Accelerator dzinoita kuti zvive nyore kugadzira hova muApache Spark:
Plug uye Tamba: inobvumidza iwe kumisikidza zvirinyore zviwanikwa zvekuisa uye zvinobuda zvinogamuchira kuti vagadzire mapaipi mumaminetsi.
Data Accelerator inotsigira kutora data kubva kuChiitikohub uye IoThub uye inotsigira kurodha pasi data kuAzure blobs, CosmosDB, Eventhub, nezvimwe.
Kwete-Code Chiitiko: inotsigira kugona kumisikidza zviyeuchidzo uye kugadzirisa data pasina kunyora chero kodhi.
Uine hunyanzvi hweRula Dhizaini, iwe unogona kudoma yakapusa uye yakaunganidzwa data kugadzirisa, kumaka, uye kunyevera.
SQL mibvunzo: inobvumidza kunyora kunetsa kugadzirisa muSQL, hapana chikonzero chekushanda muScala.
Iyo yakavakirwa-mukati yekuwedzera modhi inotsigirawo mushandisi-yakatsanangurwa mabasa uye inosimudza mashandiro eAzure, semuenzaniso kutenderera muML.
Yechokwadi-nguva kubvunza: Inochengetedza setup uye bvunzo pombi yekugadzirisa nguva nekumirisana neinouya data masampuli uye kugadzirisa mibvunzo yako mumasekondi.
Pakupedzisira, Microsoft yakataura kuti iyo yekuwedzera accelerator inotsigira yekukurumidza kuongorora kutenderera kwekuvandudza bvunzo zvishwe, uko mibvunzo yezviitiko zvakatemwa zvemuno inogona kugadziridzwa iteratively kuti iwanikwe isati yaendeswa, iyo inogona kuchengetedza yakawanda nguva yekuyedza kufambiswa kwebasa kufambiswa.
Data Accelerator inoshandiswa mazuva ese neMicrosoft's Dhivhisheni Chikamu uye icharamba ichigadzirisa maturakiti nekufamba kwenguva, asi isu tinoziva kuti iyo turu yekushandisa inogona kuita zvakanyanya kudikanwa.
Data Accelerator inopa mukana kune chero munhu anoshuvira kugonesa uye kurerutsa kushandiswa kweaya epamberi maficha.
Isu tinovimba kuti nekuvhura chirongwa ichi, vamwe venyu muchawana iyo yekuwedzera accelerator kunyangwe ichinyanya kubatsira.
Kana iwe uchida kuwana rumwe ruzivo Nezve iyo Data Accelerator kodhi, unogona kushanyira chiziviso pane yakavhurika sosi blog yeMicrosoft.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Data Accelerator, mupiro mutsva waMicrosoft kuvhura sosi
Chrome 74 iri munzira, ine yakasviba modhi mukati Windows 10 uye kugadzirisa zvakavanzika
DBeaver, gadzirisa akasiyana marudzi eadhatabhesi kubva kune imwechete application